Accueil > Gazetin'ny nosy > Firenena Mikambana : Aza manao resaka misavoan-danitra
Nisokatra omaly any amin’ny foibeny any New York Etazonia ny Fivoriam-be faha-76-n’ny Firenena Mikambana, ary haharitra hatramin’ny faha-28 septambra. Ny faha-21 ka hatramin’ny faha-27 Septambra no hiatrehana ny ady hevitra sy fandraisam-pitenenana ho an’ny solontenam-panjakana isan-pirenena. Ny fivorian’ny filankevitry ny Minisitra natao teny Mavoloha ny faha-8 septambra teo dia nanipika fa “hisy ny solontenam-panjakana Malagasy handray anjara amin’io Fivoriambe io”. Raha ny rariny sy hitsiny dia ny filohampirenena no tokony mandeha mitarika ny solontenam-panjakana Malagasy any, ary tokony mialoha lalana azy ny minisitry ny raharaham-bahiny. Asa anefa izay mbola ho fanapahan-kevitry ny fitondram-panjakana satria tamin’ny taon-dasa, ohatra, dia ny Praiminisitra no nalefa nitarika ny solontenan’i Madagasikara.
Ny fivoriambe toa izao dia sehatra itondran’ny firenena mpikambana ny hetahetany, ny fitakiany, anazavany koa ny zavatra goavana nataony na tokony hataony, ary tsy azo hamaivanina ny anjara-toeran’ny firenena mpikambana eo anivon’ny rafitra iraisampirenena toa ity Firenena Mikambana ity.
Handray anjara fitenenana any izany ny solontenam-panjakana Malagasy. Manantena ny maro fa hevitra mafonja no hoventesin’ny mpitarika ny solontenan’i Madagasikara any. Efa voafaritra moa ny lohahevitra ifotoran’ity Fivoriambe faha-76 ity, dia “ny fanorenana indray ity bolan-tany ity taorian’ny famotehan’ny Covid 19, sy ny fanajana ny zon’olon isambatan’olona…”
Goavana izany ary tena malalaka. Ny antsika dia tokony tsy hevitra misavoan-danitra no hokabariana fa izay takian’izany fanorena any taorian’ny Covid 19 izay tokoa. Tokony hifototra amin’ny famokarana sakafo izany dia ny fiompiana sy fambolena, ary tokony hasandratra ny antoka ananan’i Madagasikara amin’ ny ho fampanjariana izany sy ny fialana amin’izao fahasahiranana mavesatra izao, ka ny harem-pirenena no ho fototr’izany.
Tokony tsy hadinoina koa ny miresaka momba an’ireo Nosy Malagasy manodidina, ary tsy ny lahateny atao eo anoloan’ny fivoriam-be ihany no zava-dehibe fa ny “fihaonana eny andalan-tsara” rehetra eny, izay isan’ny paika ady ahitam-pahombiazana amin’ny dinika sy fifandresen-dahatra rehetra takian’ny tena fanavotam-pirenena Malagasy sy ny fanarenana ny fiainam-bahoaka.